Mon Petit Avatar: UNIQLO @ Central World
Posted by Mon Petit Avatar at 11:20 PM
တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ် မညောင်းတမ်းပတ်နေရရင် ကောင်းမှာ
ခြေညောင်းရင် အောက်ဆုံးက အစားအသောက်လေး(ခေါက်ဆွဲလားမသိ) စားလိုက်ရရင် ရှယ်ဘဲ..
အဲ့ဒါ ဘမီလားမတိး) <3 သာကူလုပ်ရင် တင်ပေးအုံးမှာ <3
ဟုတ်ပ ချောပြောသလိုဘဲ အကြံတူ ရန်သူ နဲ့ တွေ့နေပြီ
Both are interesting: jeans and noodle :)
I love H&M which is not very expensive and has various styles. Japanese version would be more interesting, I guess, as some western versions do not suit with me. Thanks Mon.
ဟုတ်တယ်... Uniqlo က ဝန်ထမ်းတွေက တကယ့်ကို well trained တွေနော်... အဲဒီဆိုင် ဒီမှာလည်း ရှိတယ်... လူငယ်တွေအတွက် တော်တော်လေး အဆင်ပြေပုံရတယ်... သားရဲ့ favourite လေ...း))
တနေ့က H&M စဖွင့်တယ်... မနက်မှာ ဆိုင်ထဲဝင်ဖို့ကို ဆိုင်ရှေ့မှာ ညအိပ်စောင့်တဲ့သူတွေ မနည်းဘူးတဲ့... အဲဒါနဲ့ နောက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့ အမ သွားကြည့်တယ်.. ဆိုင်ထဲဝင်ဖို့ တန်းစီနေတဲ့လူတွေက ၂၀၀ လောက်ရှိတယ်... ဒါနဲ့ပဲ လက်လျှော့ပြီး ပြန်ခဲ့ရတယ်... ဘာတွေများ ဂလောက် ထူးခြား ဆန်းပြားလို့ပါလိမ့်လို့ တွေးမဆုံး... ငေးမဆုံး...း)))
ှSomerset 313 မှာ Uniqlo ရှိတယ်။ ဈေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးက မဆိုးဘူး။ ဘန်ကောက်ကဆိုင်က ပိုကြီးတယ်နဲ့တူတယ်...
မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီး ရောက်လာကြောင်းပါ :) စီပုံးမရှိလို့ ဒီမှာရေးသွားတာဗျ
ချောရေ အဲဒါ ခေါက်ဆွဲ ဟုတ်တယ်။ ပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့တောင်စားချင်လာပြန်ပြီ ဟီး။
ကျေးဇူးနော် ဘေဘီ သာကူအတွက်။ မျှော်နေတယ်သိလား။
မမရွှေဇင် ရေ ဈေးဝယ်တူတူထွက်ကြရအောင်။
Iora ရေ တို့လဲ H&M နဲ့ Uniqlo ကို ဈေးသိပ်မကြီးလို့ကြိုက်တယ် သိလား။
မမသက်ဝေရေ H&M က အသစ်ရောက်လာလို့ရယ် ဈေးလဲသိပ်မကြီးလို့ရယ်ကြောင့်နဲ့ တူပါတယ်။ ဒီနေ့ Uniqlo ထပ်သွားတော့ တန်းမစီရတော့ဘူး မမရေ။
နောက်တခေါက် Singapore သွားရင် Somerset ကဆိုင်ကို စပ်စုလိုက်ဦးမယ်။ Bangkok ကဆိုင်ကပိုကြီးမယ်ထင်တယ် ညီမလေးရေ။
ဟိုးတစ်နေ့ကပဲ သွားဝယ်လာပြီ။ ဟိဟိ။ အင်္ကျီရယ်၊ ဘောင်းဘီရယ်။ ဂျာကင်ရယ်...။ ကြိုက်၏။ Leggyကို အကြိုက်ဆုံး :)